नेपाललाई सेरमको पत्र–‘भवनमा आगो लाग्यो अहिले खोप दिन सकिन्न’ – Health Post Nepal
२०७८ वैशाख २३ गते १०:१४
कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले कम्पनीको एउटा भवनमा भएको आगजनीका कारण तोकिएको समयमा नेपाललाई खोप दिन नसक्ने भन्दै पत्र पठाएको खुलासा भएकाे छ।
कम्पनीका तर्फबाट सिइओ अदार पुनावालाले मार्च ३ मा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेखेरै आगामी महिना पनि खोप दिन नसक्ने जनाएका हुन्। तर याे तथ्यलाई सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेकाे छैन।
कम्पनीले नेपाल सरकारसँग २० लाख डोज खोप दिनेगरी सम्झौता गरेपछि ८० प्रतिशत रकमसमेत भुक्तानी लगिसकेकाे छ। तर अहिले विभिन्न वहानामा खोप दिन ढिलाइ गर्दै आएको छ।
यद्यपि भारतमै कोरोनाको महामारी भयावह बनिरहेको अवस्थामा भारत सरकारले खोप निर्यातमा रोक लगाएको छ । तर, कम्पनीले सरकारले प्रतिवन्ध लगाएको कारण उल्लेख नगरी खोप उत्पादन भइरहेका मध्येको एउटा भवनमा आगजनी बहानाको रुपमा अगाडि सारेको छ।
सेरमले उत्पादन गरिरहेको खोप बेलायतकाे एष्ट्राजेनेकाले विकास गरेको हो । पत्रमा कम्पनीले क्षमता बढाएर खोप उत्पादन गरिहेको अवस्थामा आगजनी –कावुबाहिरको परिस्थिति आइपरेको भन्दै पहिला भनेजसरी सप्लाई गर्न नसक्ने दोहोर्‍याएकाे छ।
आगामी दिनमा उत्पादन क्षमता बढाएर उत्पादन सहज भएपछि फेरि खबर गर्ने भन्दै कम्पनीले कहिले खोप दिन सकिन्छ भन्नेसमेत खुलाएको छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दिपेन्द्ररमण सिंहले सिरमसँगै सम्पर्क भइरहेको र विभिन्न कारणले खोप दिन ढिलाइ हुन्छ भनिरहेको बताए।
मे ३मा लेखेको पत्रबारेको प्रश्नमा उनले भने ‘व्यवस्थापन महाशाखाले कम्युनिकेसन गरिरहेको छ, कहिले कच्चा पदार्थ भएन भनिरहेको छ, पछि कच्चा पदार्थ सहज भयो रे भन्ने पनि आएको थियो,’डा. सिंहले थपे, ‘हामी ल्याउँन प्रयासरत छौं।
सुरुमा सिरमले नेपाल सरकारसँगै २० लाख डोजको खोप दिनेगरी सम्झौता गरेकाे थियो । कम्पनीकै शर्तअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर ८० प्रतिशत रकमसमेत भुक्तानी गरिसकेको थियो । सो सम्झौतापछि १० लाख डोज खोप नेपाल आए पनि थप १० लाख दिने समयमा भने कम्पनीले अनेक वहानावाजी गरिरहेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीले भने कम्पनीका ‘झोले एजेन्ट’का कारण खोप ल्याउन अवरोध उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन्। योसँगै सम्झौताअनुसारको खोप रोक्नमा चलखेल गरेको भन्दै कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट विजय दुगड र सुरज बैद्य पनि विवादमा तानिएका छन् ।
संसारभर चलिरहेको महामारीबाट नागरिकको जीवन जीवन र देशकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको खोप खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री र उनी निकट मानिससमेत जोडिरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय उच्च स्रोतले आयोमेललाई यो पत्र उपलब्ध गराएको हो।
अस्ट्रेलिया जानुअघि गरिने मेडिकल चेकअपका नाममा ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय